Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseHawaii » Amahhotela aseHawaii abona ukwehla kwemali engenayo nokuhlala abantu
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba Ezintsha zaseHawaii • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Izidingo Zokuvakasha Ezintsha Zamazwe Ngamazwe ZaseHawaii
Imboni yamahhotela eHawaii ibone ukwehla ngoSepthemba RevPAR kanye nokuhlala ezweni lonke ngokuqhathaniswa noSepthemba 2019, ngokwengxenye ngenxa yemiphumela yokuhlukahluka kweDelta okubonisa isidingo sohambo.
Ihhotela laseHawaii i-RevPAR yehle ngo-13.5% ngoSepthemba 2021 uma kuqhathaniswa noSepthemba 2019 ngenxa yokuhlala kancane.
Amahhotela aseHawaii asahola isizwe e-RevPAR nase-ADR.
Ezinyangeni eziyisishiyagalolunye zokuqala zika-2021, ukusebenza kwehhotela laseHawaii ezweni lonke kwaqhubeka ukuthinteka ubhadane lwe-COVID-19.
Amahhotela aseHawaii ezweni lonke abike imali ethe xaxa ekamelweni ngalinye elitholakalayo (i-RevPAR), isilinganiso sansuku zonke (ADR), nokuhlala abantu ngoSepthemba 2021 uma kuqhathaniswa noSepthemba 2020 lapho ukuhlukaniswa koMbuso ngabahambi ngenxa yesifo se-COVID-19 kuholele ekwehleni okukhulu umkhakha wehhotela. Uma kuqhathaniswa noSepthemba 2019, i-ADR kuzwelonke yayiphezulu ngoSepthemba 2021 kepha i-RevPAR yayiphansi ngenxa yokuhlala kancane.
NgokweHawaii Hotel Performance Report eshicilelwe yi Isiphathimandla Sezokuvakasha saseHawaii (HTA), i-RevPAR yezwe lonke ngoSepthemba 2021 yayingu- $ 168 (+ 442.6%), ne-ADR ingama- $ 304 (+ 102.7%) nokuhlala amaphesenti angama-55.2 (+ 34.6 percent points) uma kuqhathaniswa noSepthemba 2020. Uma kuqhathaniswa noSepthemba 2019, i-RevPAR yayingamaphesenti ayi-13.5 aphansi, Kuqhutshwa indawo yokuhlala ephansi (-23.8 amaphesenti wamaphesenti) angenakulungiswa ngokwanda kwe-ADR (+ 23.7%).
"Imboni yamahhotela eHawaii ibone ukwehla ngoSepthemba RevPAR nokuhlalwa kwabantu ezweni lonke uma kuqhathaniswa noSepthemba 2019, ngokwengxenye ngenxa yemiphumela yokuhlukahlukana kweDelta okubonisa isidingo sokuhamba," kusho uJohn De Fries, umongameli kanye ne-CEO yeHTA. "Lokhu kusikhumbuza ukuthi ubhadane alukapheli futhi kufanele sihlale siqaphile ukugcina imiphakathi yethu iphephile futhi nomnotho usendleleni."
Okutholwe yilo mbiko kusebenzise idatha ehlanganiswe yi-STR, Inc., eqhuba ucwaningo olukhulu kunawo lonke nolubanzi kakhulu lwezakhiwo zamahhotela Iziqhingi zaseHawaii. NgoSepthemba, ucwaningo lubandakanya izindawo eziyi-144 ezimele amakamelo angama-46,094, noma amaphesenti angama-85.4 azo zonke izindawo zokulala namaphesenti angama-86.0 wezindawo zokuhlala ezinamakamelo angama-20 noma ngaphezulu eziqhingini zaseHawaii, kufaka phakathi lezo ezinikezela ngezinsizakalo ezigcwele, insizakalo elinganiselwe, namahhotela amakhondomu. Izindawo zokuqasha amaholide nezindawo ezibekelwe isikhathi azange zifakwe kulolu cwaningo.
NgoSepthemba 2021, abagibeli abafika bevela ngaphandle kwezwe bangadlula amandla ombuso okuzimele wezinsuku eziyishumi uma begonywe ngokuphelele e-United States noma ngomphumela wokuhlolwa we-COVID-10 NAAT ovumelekile ovela ku-Trusted Testing Partner ngaphambi ukuhamba kwabo ngohlelo lwe-Safe Travels. Ngo-Agasti 19, 23, UMbusi waseHawaii uDavid Ige unxuse abahambi ukuba banciphise ukuhamba okungabalulekile kuze kube sekupheleni kuka-Okthoba 2021 ngenxa yokwehluka kweDelta okuholele ekutheni uhlelo lwezempilo lukahulumeni lusindwe ngokweqile.